Ndị njikwa İETT gere ntị na nsogbu nke ndị ọkwọ ụgbọ ala nkịtị RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulNdị isi IETT gere ntị na nsogbu nke ndị ọkwọ ụgbọala nke ndị nkịtị
04 / 12 / 2019 34 Istanbul, IETT, General, Ụzọ Awara Awara, oru, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Mpaghara Marmara, Turkey
Ndị isi iett gere ntị na nsogbu nke ụgbọ ala ọha nkeonwe
Emere nzukọ izizi nke ndị isi IETT na ndị ọkwọ ụgbọ ala na-arụ ọrụ na Personal Public Bus na IETT Kagithane Garage. Onye ọkwọ ụgbọ ala 100 kọwara nsogbu onye ọkwọ ụgbọ ala na ndị isi nchịkwa IETT tinyere ndetu.
Usesgbọ ala ọha na ndị nkịtị bụ isiokwu na-abụkarị mkpesa gbasara ụgbọ njem ọha na Istanbul. Site na ịdị mma nke ụgbọ ala gaa na ịdị ọcha, uwe ruo na omume nke onye ọkwọ ụgbọala iji nweta ọtụtụ mkpesa banyere Public Bus (ÖHÖ) agbakọbara aka nke IETT.
Iwu onye isi obodo nke obodo Istanbul Ekrem Imamoglu, bụ nke bụ iji gee ntị na nsogbu nke mkpesa ahụ, emere mkpebi ịhazi ndị ọkwọ ụgbọ ala.
Emere nzukọ nke mbụ n'ime nzukọ ndị a na IETT Kağıthane Facilities. Ndị isi IETT na 100 driverHO onye ọkwọ ụgbọala bịakọtara ọnụ n'ụlọ nzukọ ogbako ahụ gbanwere echiche. Onye isi oche nke IETT, Onye Ọchịchị Erol Ayartepe, malitere n'okwu mmeghe, kwupụtara echiche ha site na iwere igwe okwu otu otu.
Mkpesa mbụ ndị ọkwọ ụgbọala ahụ bụ maka ndị njem na-enweghị kaadị ahụ. ”N’ime iji kaadị onye ọzọ, a ga-ahụ kaadị ahụ ụzọ dị mfe iji kagbuo ya, nwa amaala na onye ọkwọ ụgbọ ala ekwesịghị ịgabiga ihu” bụ otu n'ime nsogbu pụtara ìhè.
Ndị ọkwọ ụgbọ ala nkeonwe kwuru na ekwesịrị ka ndị mmadụ mara maka njem a na fim ndị nkwado ka akwadoro. Otu onye na-ekwu okwu kwuru, sị, “Anyị nwere ndị njem chọrọ ịpụ n'ọnụ ụzọ dị n'ihu wee pụọ n'ọnụ ụzọ.
Otu n'ime nsogbu ndị ọkwọ ụgbọala welitere bụ na ụmụ amaala mkpesa na Nweta Alo 153 ọtụtụ oge. Mkpesa n'ihi oke ntaramahụhụ a na-edegara ha na-eme mkpesa maka ndị ọkwọ ụgbọala, mkpesa, dị ka foto ma ọ bụ vidiyo kwesịrị ka a gbaa akaebe, ka o kwuru.
Onye ọkwọ ụgbọ ala ọzọ kwuru, minibus ọkwọ ụgbọ ala, onye chọrọ ka m fụọ opi ma pụọ ​​n'ọdụ ọdụ ahụ, nwere ike ime mkpesa banyere m site na-akpọ Alo 153 n'ihu m ebe ndị njem na-abanye na bọs. "
Na nzukọ ahụ, nke were ihe karịrị awa abụọ, enyere ndị ọkwọ ụgbọala ajụjụ a na ha agaghị ede aha ha. A ga-emeju ajụjụ ndị a kpọtụrụ aha na nzukọ na azịza nke ajụjụ zuru ezu na nyocha ahụ. N'ikwekọ na akụkọ a, IETT ga-akọwapụta usoro a ga-eme iji melite Publiczọ Bọọlụ Ọha Onwe.
A ga-eme nzukọ na ndị ọkwọ ụgbọala a oge oge niile, na-enye ohere ịkọwa nsogbu nke ndị ọkwọ ụgbọ ala nkeonwe yana iwepụta ihe ụmụ amaala chọrọ.
BURULAŞ na-enye ọzụzụ maka ndị ọrụ ọkwọ ụgbọ ala
Ankara Private Public Bus na Onwe Ọdụ Ndị Ọgbọ Ọgbọ na-ahụ maka Ndị Ọrụ Ọgbọ
Ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-azụ ụgbọ okporo ígwè na Kayseri
Ọchịchị Ndị Ọkwọ Ụgbọ Mmiri Ọha Na-adịghị Achịcha Na-abụghị Nwụrụ Anwụ
Ejiri Ikike Na-egbochi Nsogbu nke Ndị Ọkwọ ụgbọala na Istanbul
Ejirila Ogwe Akaụntụ Ọha Mmadụ Ọha Na Na Na Bursa
Asambodo Nweta Access maka Bus Public Bus
Ndị ọkwọ ụgbọ ala ọha na eze na Kahramanmaraş nwetara akwụkwọ asambodo ha
Iwu nke ụgwọ nchịkwa nke ọha na eze na Korucuk
Nsogbu okporo ụzọ na Istanbul ga-edozi!
Ndị na-ahụ maka IETT Were ekwentị na ALO 153
Ndị ọrụ IETT batara na saịtị ahụ site na Ntụziaka Imamoglu
Ndị ọkwọ ụgbọ ala nke onwe ha
Ụlọ Ọha nke Onwe
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 4 Dec 1929 onye na-ehi ụra kabinet
Kọmitii ịnabata ọpụpụ oge nke Samsun Sivas na-erute na Samsun